Iyo Samsung Galaxy Inotevedzana nhoroondo ine yakapfuma nhoroondo yekuve yekutanga yakakodzera mafoni makuru-skrini akawana mukurumbira. Iyo yekutanga yeGlass Note inoziva izwi rekuti "phablet" uye yakajairwa nematanho akakura ekutsikisa tsoka. Iyo S pen yakagadzira yayo yega niche. Kuratidzwa kwakakura kwakatora nyika. Nekudaro, nekuwedzera kwemukurumbira kwakauya kuwedzera kwemitengo. Samsung yakawedzera zvakatsiga mitengo yeGenesis Cherechedzo chizvarwa chimwe nechimwe, kusvika padanho rekupedzisira Samsung Galaxy Note 10 + inodhura madhora 1,100 / ₹ 79,990. Mutengo wekubvumirwa kwefoni dzema Samsung dzine simba kwazvo gore rega rega zvave zvichikambaira. Isu tinoziva vashandisi veGlass Note vashandisi vakavimbika nekuda kweiyo yakasarudzika yakasanganiswa yekushanda, asi vangavimbika sei pamberi pekukwikwidza mutengo unowedzera? Inguva yakareba sei iyo mutengi anogona kuramba achibhadhara mari yepamusoro yeiyo yazvino Ongororo mureza kungoita yekutanga S Pen ruzivo? Samsung inonyatsoziva nezve conundrum iyi, uye mhinduro yayo kumubvunzo uyu yaive yekuburitsa Samsung Galaxy Note 10 Lite mwedzi wapfuura.
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite inogura pasi pane iyo premium yakatemwa inowanikwa muGlass Note 10 uye iyo Galaxy Note 10+. Nekubvisa isina waya kubhadharisa, yakasimbiswa mvura kudzivirira, kudzikisira ratidziro yekushongedza kuKazara HD + kubva QHD +, uye kutamira kune zvakachipa zvekuvaka zvekuvakisa, Samsung yabudirira kubudirira kuenda pasi kune mutengo wakaderera tag. Chinonyanya kuderera pane pepa ndeiyo SoC, apo Exynos 9825 / Qualcomm Snapdragon 855 yeGreen Note 10 inopa nzira yeExynos 9810 SoC, iyo yaifambisa Samsung yemakore maviri Samsung. Galaxy S9 uye Samsung Galaxy Note 9. Chikwangwani chekambani chinova chinonyanya kuvhiringidza kana uchifunga kuti Galaxy Note 10 Lite yakavambwa pamwe neGreen S10 Lite, ine Snapdragon 855 inokurumidza, ichirasikirwa neiyo S pen uye kamera yefoni.
Mubvunzo ndouyu: ko izvo zvinoderera zvinoita kuti gadziriso yeGlass Note 10 Iite yakangwara kutenga muukoshi hwemutsetse / wepamusoro wepakati chikamu chechikamu, kana vakakura zvakakwana kuti vave vatengesi-vekupaza? Iyo Mucherechedzo 10 Lite inofananidza sei kupesana neS10 Lite? Inoenzanisa sei inodhura 2019 uye 2020 mireza senge OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, Realme X50 Pro, IQOO 3, Redmi K20 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, ASUS ROG Runhare II, nevamwe? Ko iko kusakendenga kwadzo kwakaputirwa nemazita ayo? Ngationgororei iyi mibvunzo muye kuzere kuongorora.
Galaxy Cherechedzo 10 Lite Rondedzero
6.7-inch Yakazara HD +
Super AMOLED Infinity-O Ratidza
- Wide-angle: 12MP, Dual Pixel AF F1.7 OIS
10nm 64-bit Octa-musimboti processor (Quad 2.7GHz + Quad 1.7GHz) - Exynos 9810
6 / 8GB RAM ine 128GB yemukati yekuchengetedza
Yakakura AMOLED kuratidza ine yakarerekera gomba-punch kamera
Iyo kukosha kwechinongedzo haina kufananidzwa kune S Pen vashandisi
Yakanaka yakadzika mwenje mufananidzo wemhando neyakagadzirirwa-husiku maitiro
25W Super Fast Charging inoshanda nemazvo
Tsika hurombo uye chaiyo-nyika kuita pamwe neparceptible furemu madonhwe
Glossy purasitiki kumashure inonzwa yakaderera premium pane girazi uye inowanzoitirwa zvigunwe
Zuva remufananidzo kamera mhando inogona kuve nani
Kukura kwakakosha kukosha hakuna kunaka
Nezve ongororo iyi: Samsung India yakanditumira yunivhesiti yeiyo 8GB RAM / 128GB yekuchengetera kusiyanisa kweGreen Note 10 Lite. Maonero ese mune ino ongororo ndeangu. Ongororo iyi yakaburitswa mushure memwedzi wakazara kushandiswa.
Samsung Galaxy Cherechedzo 10 Lite XDA Foramu
Samsung Galaxy Note 10 Lite - Dhizaini
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite dhizaini ndeye mashup ezvigadziriso zveSamsung Samsung Note 10+ uye Samsung Galaxy S20 + pamwe chete nemamwe mashoma akasiyana akasiyana akakandirwa mukati.
Ngatitangei nemhando yekuvaka. Iyo Galaxy Note 10 Lite ine aluminium chimiro uye inobhururuka epurasitiki kumashure, iyo Samsung inoreva se "Glastiki". Uku kusanganisa kunonakidza. Iyo aluminium furemu yakapukutwa kuti itarike segirazi, uye inobhururuka epurasitiki kumashure inotaridzikawo yakafanana negirazi iri kure. Izvo chete kana iwe ukabata foni kuti iwe unogona kuona mutsauko uripo pakati pepurasitiki uye girazi. Iyo inopenya yepurasitiki inopera pano inonzwa ichidziya kupfuura girazi rakacheneruka rinoshandiswa pane mafoni emagetsi e Samsung pamwe nevakwikwidzi muchikamu ichi chemutengo.
Hapana mubvunzo kuti iyo glossy plastiki inoshandiswa pano inonzwa yakaderera premium kupfuura kunyange glossy girazi, rega matte girazi. Muchikamu ichi chemutengo, mireza yakawanda inobhadharwa uye epamusoro mid-range mafoni anoshandisa girazi kumashure. Iyo Galaxy Note 10's Lite's plastiki yepurasitiki kumashure ndeyese ari maviri uye musvo. Inonzwa kushoma payum, asi zvakare yakasimba. Plastiki haina maitiro ekupwanya egirazi. Mukushayikwa kwealuminium, sarudzo ye Samsung yekucheka mutengo mune ino inoita imwe huwandu hwepfungwa. Izvo zviri kune zvakakosha zvevatengi pano. Nechemumoyo, foni yakakodzera uye kupera yakanakira sezvaungatarisira, ine zvinyoronyoro rakakomberedzwa makona. Iyo plastiki yekumashure ndiyo yega inogona kupokana pano. Ndingadai ndakasarudza kupera kwepurasitiki yematte, zvakadaro.
Kumberi, iyo Galaxy Note 10 Lite inoshandisa dhizaini yakafanana neGirazi Mucherechedzo 10+ uye neGirazi S20 +. Iyo ine zvishoma bezels pamativi ese, ine gomba punch 32MP yekumberi kamera yakaiswa panzvimbo pakati padyo nepamusoro pechiratidziro. Iwo bezels pachavo havana kuonekera sekutetepa sezvingaite iyo Galaxy S20 + kana Galaxy Cherechedzo 10+, asi ivo vakanaka pachikamu ichi chemutengo. Iine chiyero-kune-muviri chiyero che86.6%, iyo Galaxy Note 10 Lite iri mune yepamusoro tier. Iyo yekuzevha yakaiswa pane yepamusoro furemu.
Ese maviri bhatani bhatani uye bhatani rerutivi rakaiswa kurudyi rwefoni. Rutivi rworuboshwe rune SIM tereyi, iyo yemhando dzakasiyana yebrbrid (dual nano-SIM kana nano-SIM + microSD), sezvaitarisirwa. Kune maikorofoni maviri. Iyo 3.5mm musoro wefoni jack, iyo isiripo mune Samsung Galaxy Note 10 nhepfenyuro, Samsung Galaxy S20 nhepfenyuro, uye kunyange iyo Samsung Galaxy S10 Lite (ongorora), aripo pano. Iyo yakaiswa pasi, pamwe ne USB 2.0 Type-C port uye mukurukuri mutauri. (Iyo yekuzeveso inowedzera seiri yechipiri hurukuro.) Iyo S Pen yakavharirwa iri kurudyi chikamu chezasi. Nezve bhatani rinonzwa, iwo maGlass Note 10 Lite's mabhatani anoita basa rinoyemurika sekusindimara kwavo uye simba rekuratidzira kwakanaka. Iko vhoriyamu bhatani dhizaini haina kukodzera, hazvo, sezvo ivo vachiiswa zvishoma yakanyanya pamusoro-kurudyi ruoko.
Makona akakomberedzwa uye akatenderedzwa anopa nzira kumashure, uko kwatinowana katatu kamera (12MP + 12MP + 12MP) setup. Yakaisirwa munzvimbo yakavharwa. Iyi foni yakaburitswa pamberi peGlass S20 nhepfenyuro, uye kamera yakavharidzirwa yakafanoratidzira iyo yeiyo S20 yekugadzirwa kwekhamera. Ipo iyo Galaxy S20 uye iyo Galaxy S20 + inoisa rectangular kamera, yeGreen Note 10 Lite inoenda neimwe yakareruka skwere imwe, ine matatu kamera uye LED mwenje yakaiswa symmetrically mukati. Iyi dhizaini yakasiyana neiyo yeGreen Note 10 + 'dhizaini, uye zvinoita kunge Samsung iri kumira ichi kuenda kumberi. Chakanakisa, chinotaridza kunakirwa paGlass Note 10 Lite nekuda kwekuenderana. Chiratidzo che Samsung uye zvinyorwa zvinoteedzera zvinotenderera zvakasara.
Iyo Galaxy Note 10 Lite inouya mune matatu mavara: Aura Black, Aura Glow, uye Aura Red. Iyo nhema dema ndeye yakajairika kupedzisa kupera, nepo iwo Aura Glow mavara Samsung senzira yekuedza kutora gradient kupedzisa iyo yakakurumbira muna 2018 na 2019. Ini ndakawana iyo Aura Red mutsauko yekuongorora, iyo inoshandisa mumvuri mumwe mutsvuku. Sezvinotarisirwa, harisi iro ruvara rwaunowana kana iwe usingade kuti foni yako iratidzike. Iyo Galaxy Note 10 Lite's Aura Red kupera kwakakundwa kupfuura chimwe chinhu senge OnePlus 7 yeruvara rutsvuku, asi ichiri pachena, izvo zvinogona kuve chinhu chakanaka uye chinhu chakashata zvichienderana nekwaunomira. Aesthetically, ndinofunga kuti zvakanaka kutaura kuti Aura Glow color ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo.
Panyaya ye ergonomics, iyo Galaxy Note 10 Lite inoita yakanaka. Kurema kwayo kwemadhigiramu zana nemakumi maviri zvakaenzana, ukobvu hwayo wakanaka pakati nepakati, uye kunyangwe iwo iwo 199: 20 9-inch kuratidzwa iri mirefu, zvinoshamisa kuti inokwanisika kuribata. Iyo foni inonzwa ichionga kushoma kupusa pane vese iyo OnePlus 6.7 Pro uye OPPO Reno 7x Zoom, uye zviri nyore kushandisa foni kwenguva yakareba usingaite kuti maoko ako aneta.
Pakazara, Samsung inowana yakawanda chaizvo nekugadzirwa kweGreen Note 10 Lite. Iyo yepurasitiki kumashure ndeye kuderera pane zvekunzwa, asi kukwidziridzwa maererano nekusimba. Iwe unorasikirwa neIP68 yakasimbiswa kudzivirira mvura, inova iripasi. Nehurombo, hachisi chinhu chakajairika panguva ino yemutengo, zvakadaro. Iyo yakasanganiswa aesthetics yeiyo yakakomba hole-punch kamera, iyo yakaringana idiki bezels, uye zvinyoronyoro rakakamurwa mativi zvinoita kuti dhizaini iyi ibudirire maererano nechitarisiko uye kunzwa pamwe ergonomics.
Bhokisi reGreen Note 10 Lite rine 25W USB-C PD 3.0 "Super Fast Charger" ine PPS, USB Type-C kune Type-C tambo, generic 3.5mm nenzeve, uye pachena purasitiki kesi. Iyo kambani haina kubatanidza USB Type-C kune Type-A tambo mubhokisi. Ini ndinonzwisisa kuti sei Type-C ichidikanwa kuti USB-C PD 3.0, asi ingadai isina kukuvadza Samsung kubatanidza Type-A tambo zvakare, izvo zvaizove zvakagonesa vashandisi kubatanidza foni kune chero PC ine USB Type- Chiteshi. Iyi sarudzo inogamuchirwa ichitarisa kudhura-kutema kuti uburuke pane ino mutengo, asi pane nzvimbo yekuvandudza pano.
Samsung Galaxy Tarira 10 Lite - Ratidza
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite ine 6.7-inch Full HD + (2400 × 1080) Super AMOLED kuratidzwa ine 19.5: 9 chikamu chiyero, 394 PPI, uye 60Hz kuzorodza mwero. Kune avo vaverengi vachiri kuchengetedza chikwangwani, iwo mamiriro ekuratidzira ari 155 mm x 70 mm, zvinoreva kuti upamhi hwekuratidzira hausati wakaenzana neiyo 6.7-inch diagonal inoita kuti iite senge. Sezvo inoratidza dixonal saizi ichikwira, vagadziri vemidziyo vanofamba vachienda kukureba-uye-kushoma kwemaitiro zvikamu zvakaita 20: 9 kana kunyange 21: 9. Kune 6.7-inch screen size, 20: 9 inonzwisisika, kunyangwe ini pachangu ndingadai ndakasarudza 19.5: 9.
Iyo inoratidzwa iyo "Super AMOLED" nomenclature pachinzvimbo che "Dynamic AMOLED" zita Samsung riri kushandisa kuchizvarwa chavo chitsva AMOLED chinoratidzira chinoratidza kuti ipanhau rekare. Kushaikwa kwe "Dynamic" chikamu kunoreva kuti hakutsigire HDR10 +. Iyo inotsigira yekare HDR10 standard, zvakadaro. Chinhu chikuru chekuwedzera ndechekuti chiratidziro chiri yakazara gorofa, pane kuve uine rakakomberedzwa senge Garafu Cherechedzo 10 kana Girazi S20. Ichi chikuru chikuru chekushandisa iyo S Pen (pikisa pasi kuti uwane zvimwe zvizere pane ichi mune chikamu cheSoftware pazasi). Iyo girazi inoratidzira zvakare inoona yekuratidzira chivharo haina kupambadzwa, pane kushomeka, uye inoshanda zvirinani nevaridzi vanodzivirira. Iwo aesthetics anotora kurova, shuwa, asi zvinoshanda, iyo gadziriso yeGeneral 10 Lite inoratidzika kupfuura iyo yeiyo inodhura Cherekedza gumi akasiyana.
Iyo yekuratidza's Full HD + (1080p) kugadziriswa kwakanaka panguva ino yemutengo, kunyange pa6.7-inch diagonal. Kunyangwe iwo maGlass S20 akateedzera ngarava neKuzere HD + kugadzirisa kunze kwebhokisi. Nekuda kwekufambira mberi mune subpixel anti-aliasing, Full HD + OLED kuratidzwa zvava nani zvakanyanya maererano nekujekesa makore mashoma apfuura.
Iyo Galaxy Note 10 Lite's show ine avhareji kupenya painogadziriswa pamurume, ichienda kunokwana mazana matatu matatu kusvika makumi matatu. Nechemumoyo, ine inoshanda yakakwira High Brightness Mode (HBM) inotora kupenya kuratidza kuti ~ 300 nits ku350% APL muchiedza chezuva, chero bedzi auto-kupenya kubvumidzwa. Izvi zvinoreva kuti kuwanda kwezuva haisi nyaya, uye zvemukati zvinogona kuitwa kunze kwekuratidzira kunyange pasi pezuva chairo.
Nekuda kwe AMOLED's theoretically infinites, the Galaxy Note 10 Lite haina nyaya ine mharidzo yekuratidzira. Panyaya yekutarisa makona, zvisinei, zviri pachena kuti iyo yekuratidzira kwefoni haina kunaka sekudhura kwakanyanya kweGreen Note 10 uye neCherechedzo 10+. Ndingati izera mbiri chete (n-2) maererano nehunhu hwekuchinja kweruvara. Iyo inoratidzira ichine inooneka angular color shift uye muraraungu kunze kwekukanganisa maitiro akanyanya ma angles, iri hunhu hwakajairika Samsung isingadhuri AMOLED kuratidza. Samsung yakagadzirisa nyaya iyi mufoni yayo yekuremekedza muna 2018, asi Mucherechedzo 10 Lite unoita sekuti uri kushandisa yepakati-padanho repaneru iyo ichiratidzawo angular color change. Iyo OnePlus 7T, saka, ine mukurumbira kuratidza neine nyowani emitter, yakakwirira auto-kupenya, uye kutarisisa kutarira ma angles pasina anooneka angular mavara kuchinja. Iyo OnePlus 7 Pro zvakare ine yepamusoro kuratidza pano.
Samsung inotumira inoratidza kunze kwebhokisi neye Natural color screen mode yakashandiswa, iri sarudzo yakanaka. Izvi zvinoreva kuti tinowana akakara mavara kunze-kwe-kwebhokisi, kunyangwe kurongeka uku kwave kuchizivikanwa kuve nekusiyana kwakasiyana mumatunhu akasiyana (semuenzaniso, nhare dzeSamsung S10 dzakauya neV pachena color mode yakamiswa seyakasarudzika muIndia). Iyo Natural mode inotsigira otomatiki ruvara manejimendi kune DCI-P3 uye sRGB gamuts. Chichiri mazuva ekutanga, asi kutonga kwemavara kwawedzera zvakanyanya mune idzva foni Android kutanga kubva muna 2019. Rudzi rwemhando yemhando yemhando yakanyatso kunaka. Nyaya imwe apa ndiyo inodziya chena nzvimbo. Greyscale, satellite, uye kurongedza kwe gamut zvese zvinoita sezvakanaka mukuenzanisa neye OnePlus 7 Pro's yakagadziriswa kuratidza. Pachine nyaya diki nediki yekutema, asi kazhinji, iyo Cherechedzo 10 Lite inopa chiitiko chakanaka. Vashandisi vari kuda nemaune kugutsikana, punchy mavara ane sarudzo yekushandisa yeV pachena mode.
Iyo yekuratidza yeiyo 60Hz yekuvandudza chiyero inogona kuve isina kunaka ichienzaniswa neiyo yakakwirira yekuzorodza chiyero (HFR) kuratidzwa kuri kuita nzira yavo kune chikamu chemutengo uye kunyange pasi. Iyo 90Hz-ine OnePlus 7T uye OnePlus 7 Pro inogona kutengwa nemutengo mumwe chete, uye iwo ari mhedzisiro yekuzorodza. The Realme X50 Pro (kutanga kufungidzira) yakatungamira 2020 inokwenenzverwa mureza mukurumbira, uye iine 90Hz OLED kuratidzwa. Kunyangwe iyo yakachipa kwazvo POCO X2 (ongorora) ine 120Hz IPS LCD. Sezvatsanangurwa zvisati zvaitika, yakakwirira yekuzorodza mwero yekuratidzira inoita mutsauko wakakosha mukushandiswa kwechigadzirwa uye kupindurika kwakazara. Iyo Galaxy Note 10 Lite, zvinosuruvarisa, haina chimwe chinopfuura chakajairwa kutaura pano. Kunyangwe iyo nhare dzeGreen S20 dzinotumira ne60Hz kuzorodza chiyero kunze kwebhokisi nekuda kwesimba rekushandisa zvine simba pamusoro peiyo yakakwira 120Hz kuratidzira kuzorodza.
Iyo yakadzika hole-punch kamera pane yeGlass Note 10 Lite's kuratidza kwakanaka maererano nesability. Iyo inokanganisa zvishoma pane kamera yakaiswa kurudyi pane Galaxy S10 nhete, semuenzaniso, uye idiki yakakwana kuti irege kuva kukanganisa kukuru. Hole punch makamera ndiyo itsva yakajairwa nekutambiswa kwefoni muna 2020, uye iyo Galaxy Note 10 Lite haina kutsauka kubva pane inoitika.
Pakazara, iyo Galaxy Note 10 Lite inoratidzwa yakanaka pamutengo, asi haina yepamusoro. Izvo zvakanakawo sekuratidzwa kweGreen Note 10+? Kwete. Inofanira kuva here? Kwete. Kana ichienzaniswa nemutengo wevanokwikwidza, kuratidzwa kwacho kuri kushomeka mune zvimwe zvinhu zvikuru sekushandura kwemavara uye kushaikwa kwezororo rakanyanya. Kune rimwe divi, gorofa ratidziro inzvimbo yekuwedzera yeiyo USP yefoni: iyo S Peni. Zvimwe zvinhu zvakadai sekupenya uye nekujeka kwemavara zvinobatwa zvine hunyanzvi ne Samsung.
Samsung Galaxy Note 10 Lite - Kuita
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite yakaiswa simba nekukwegura, makore maviri Exynos 9810 SoC, iyo yaifambisa Exynos kusiyanisa kweSamsung Samsung S9 uye Galaxy Note 9 nhepfenyuro. Iko hakuna nzira mbiri dzekuisa izvi: iyi yakanyanya kuderedzwa kubva kune vamwe vakwikwidzi vakwikwidzi, yeGlass Note 10+, kana kunyange yepakati yepakati-renhare mafoni. Iyo Exynos 9810 SoC yakanga isina kunaka kunyangwe muna 2018 vachipesana neQualcomm yakaitwa zvakanaka Snapdragon 845. Muna 2020, iko kushanda hakusati kuri mumakundano chero eQualcomm Snapdragon 855 mureza. Iyo Galaxy Note 10 Lite ine yepamusoro yepakati-peji / inodhura mureza wemutengo wetigi, asi yayo SoC ndeye chero chinhu kunze kweizvozvo. Yekutanga Qualcomm Snapdragon 865 mireza yasvika pamusika, uye nepo Note 10 Lite ichikwikwidzana navo pamutengo, hapana chingaite chero chinhu sekuenzanisa kwekuita kunopesana nevano kukwikwidza.
Muna 2018, hatina kuwana mukana wekuyedza Exynos 9810 muGirazi S9 / Galaxy Note 9. Vaverengi vanofarira SoC vanogona kutarisa AnandTech's kufukidza kune onai uko iyo SoC isina kukwana pamakwikwi, nekusasimba kukuru muhurongwa iyo yechinyakare inopisa simba mashini, yakashanda zvakanaka macores, zvine chekuita nendangariro subsystem, uye kudzidzisa GPU mashandiro enguva yacho. Zvakanaka kutaura SoC haisati yakura zvakanaka.
Samsung yakagadzirisa here maExpynos 9810 mushure memakore maviri? Ngatitsvagei. Izvi zvaisazombove kuzohwina muenzanisi weGlass Note 10 Lite. Kunyangwe hama yake, iyo Galaxy S10 Lite, yakashongedzwa nezvakawanda, zviri nani Snapdragon 855 SoC. Uyu ndiwo chaiwo muenzaniso wekucheka-mutengo, asi hazviite kana zvine musoro. Nei Samsung isina kuenda neiyo nyowani Exynos 9820 SoC inoshandiswa muExpynos Galaxy S10 musiyano, semuenzaniso? Ichi chisarudzo chinonakidza.
MuPCMark Work 2.0, iyo yeGlass Note 10 Lite zvikwangwari zvisina kunaka zvakanyanya. Uwandu hwacho hwese (a geometric zvinoreva zvese zvikamu zvidiki-zvakashata) hwakaipisisa pane hwe Snapdragon 675-powered Redmi Note 7 Pro, foni inoita costs zviuru gumi ($ 10,000). Chikamu icho chiri hafu cheyavo vatambi vepamusoro pamusika. Iyo Web Browsing 135 chikoro ndiyo yakaipisisa yeiyo kirasi, uye ndizvo zvakaitawo Kunyora 2.0 Score. Iyo Photo Editing 2.0 chikamu chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zveExynos 2.0-powered Samsung Galaxy S990 + 's. Iyo data Manipulation mamakisi iri parutivi ne Snapdragon 20 mafoni uye zvakafanana zvinoshanda kune Vhidhiyo Editing bvunzo, iyo yave zvino yakadzingwa.
Mu Speedometer 2.0, indasitiri-yakajairika webhenji chibhenefiti, iyo Exynos 9810 zvakare inobvumira kudzikisa mashandiro ayo seGlass Note 10 Lite haigone kunyange kurova akwegura POCO F1.
Uyezve, iyo Geekbench mhedzisiro 5 inhau inonyengera. Nehurombo, Samsung yakatarisana zvakanyanya pane yakakwirira imwe-musimboti Geekbench scores pane chaiyo-yepasi kushanda. Mumakore maviri, hapana kugadziriswa kwekuita kweExynos 9810 kubva pakaburitswa Galaxy Note 9.
Iyo yekuchengetedza maitiro ekuita iri nani. Sekuyedzwa naAndroBench, iwo kuverenga kwakatevedzana uye kwakatevedzana kunyatsomhanya kuri parutivi nemafoni mazhinji eUFS 2.1-ine simba, kunyangwe Samsung iyo yeGlass S10 Lite iri, zvinonakidza zvakakwana, zvine mukurumbira sezvo zvichikwira parutivi neUFS 3.0-powered mafoni muzvinhu izvi. . Mune iyo yekuverenga isina kuverenga uye isina kunyorwa bvunzo bvunzo, iyo Galaxy Note 10 Lite inoita yakasimba kuratidza apo inozvisimbisa payo payo yepamusoro yeiyo UFS-powered mafoni.
Iyo Mali-G72MP18 GPU yeExynos 9810 yakaderera kune iyo Adreno 630 GPU mu Snapdragon 845. Izvi zvinoreva kuti zvakare yakaderera kune iyo nyowani, inokurumidza Adreno 640 uye Adreno 650 GPU mu Snapdragon 855 uye Snapdragon 865 zvakateerana. Yakadzika zvakadii? Tarisa uone mabhenji e3Mark pazasi:
Iwo maExpynos akasiyana eGirazi S9 uye iyo Galaxy Note 9 yakanga isingaite seyavo Snapdragon mutsauko pakubata mitambo. Iyo isina kuvhurwa GPU maitiro ebhenji mabhenji anoratidza kuti iyo Galaxy Note 10 Lite haichazove nenguva yakapusa nemitambo mitsva yepamusoro-magumo 3D pamatanho makuru ezvirongwa.
Kuita kwe UI, RAM maneja, uye nekuvhura kumhanya
Nehurombo, zvinhu hazvisi nani zvakanyanya kune yeGlass Note 10 Lite kana zvasvika kune chaiyo-yenyika performance. Kune mashoma mashoma mafoni anodonhedza pafoni yemushandisi. Kazhinji, iri inokurumidza, yakatsetseka foni kusvikira isiri. Dzimwe nguva inodonha mafuremu kana ichidhonza menyu yekuzivisa. Iyo tebhu yekushandura muGoogle Chrome inoratidza madonhwe emafuro kana mazhinji ma tabo akavhurika. Dzimwe nguva mifananidzo yeUI inokakamira, uye dzimwe nguva haigone. Dzimwe nguva iyo dhizaini dhizaini yemifananidzo inozove yakanyatsotwasuka, asi pane dzimwe nguva, kunyangwe iyo inogona kuratidza madonhwe emafaro. Pfungwa yakajairika yejank diki iripo pane iyo mose mushandisi, uye kunyange kune ese maapplication akaita sePamhepo Chitoro uye Chrome.
Nepo akawanda 2019 ne2020 mafoni ekuremekedza anoramba achienderera achikurumidza uye akatsiga, iyo Galaxy Note 10 Lite zvinosuruvarisa haigone kubatwa kusvika pakakwirira zvakadaro. Zvinondiyeuchidza nezvefoni kubva makore matatu-mana apfuura, kudzoka kana madonhwe efreyimu angave achiri kuoneka mukushandiswa kwezuva nezuva. The Huawei P20 Pro yaive runhare mbozha. Kunyangwe zvakachipa DUKU F1 runhare runotsvedza. Iyo Redmi Cherechedzo 7 Pro's boreness iri chaizvo yakafanana. Iyo Snapdragon 855 uye Snapdragon 865 mureza izvo iyo Galaxy Note 10 Lite inokwikwidza nayo iri mukirabhu yakasiyana maringe nezvekuita chaiko-nyika. Iyo OnePlus 7 Pro, semuenzaniso, inonzwa zvakanyanya kunge 1.5x nekukurumidza uye yakareruka nekuda kwekubatanidzwa kweiyo Snapdragon 855, UFS 3.0 kuchengetedza, 90Hz yekumutsiridza chiyero, uye OxygenOS'nekukurumidza mifananidzo.
Iyo Galaxy Note 10 Lite's UI yekuita ndeye, saka, isina basa. Izvo zvisina kunaka kune vashandisi vanoshingairira nezvekuchenesa kwemuchina uye kupindura. Vashandisi vanowanzoita zvakanaka, asi vashandisi vanofarira vanogona kunge vachinyadziswa.
Panyaya ye RAM manejimendi, iyo Galaxy Note 10 Lite iri parutivi rweposi. Yayo 8GB ye RAM inova nechokwadi chekuti vashandisi havazotarisana nenyaya hombe nemaapplication vachiurayiwa. Ini ndinoramba ndichishungurudzika neyekuyeuka kweyekuongororwa kweApple muhuwandu, asi icho chiri chinyorwa cheimwe zuva.
Iyo Galaxy Note 10 Lite ine chekodhi yepasi-inoratidza chigunwe chekunzwa, pachinzvimbo chekushandisa Qualcomm's ultrasonic chigunwe chekunzwa sensor, inowanikwa paGPS S10, Galaxy Note 10, uye Galaxy S20. Nehurombo, iyo sensor sensor haina kukurumidza kana kurongeka. Zvinotora sekondi kuti usunungure, uye huwandu hwayo hwakaringana iri 60% 70%. Iyo yepasi-inoratidzira Optical sensors yeOnePlus 7 Pro uye iyo OPPO Reno 10x Zoom inokurumidza uye yakanyanya kujeka. Ichi chimwe chinhu chinoratidza iyo Galaxy Note 10 Lite inokundikana kuenzanisa kusvika kune avo vanokwikwidza mutengo. 2D kumeso kusvinura kunosanganisirwa senzira. Iyo inokurumidza kupfuura sensor yemunwe, asi nekuti haina kuchengetedzeka, haigone kushandiswa mukubhadhara.
Sezvineiwo, iwo mahmuru eGlass Note 10 Lite ari nani pane ayo eExynos akasiyana eGirazi S10e. Kunyangwe uchishandisa chembere-chizvarwa SoC, iyo Galaxy Note 10 Lite inokwanisa kuchengetedza kupisa kwayo kuri mukutonga. Iyo inenge iri parutivi nemutengo wayo vanokwikwidza mukuremekedza izvi, izvo zvakanaka.
Pakazara, iko chaiko-kushanda kwenyika kweGlass Note 10 Lite zvinoodza moyo. Vatengi havazotengi foni pafoni yekushandisa kwayo UI, sezvo iri parceptibly inononoka uye isinganyanyi kutsvedza pane kukwikwidza mafoni. Masimba efoni ari mune zvimwe zvinhu, asi ini ndichiri kunetseka kuti nei Samsung yaifunga ine Exynos 9810 mufoni yepasi 2020 yepakati yaive iri zano rakanaka.
Samsung Galaxy Cherechedzo 10 Lite - Kamera Kuita
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite ine 12MP yepakutanga kamera ine Sony IMX333 sensor, 1 / 2.55 ″ sensor saizi, 1.4-micron pixel saizi, f / 1.7 aperture, 27mm yakaenzana kutarisa kureba, Dual Pixel PDAF, uye yemaziso mufananidzo kusimbiswa (OIS . Iyo 12MP Ultra-wide-angle kamera ine f / 2.2 aperture uye 12mm yakatarisana urefu. Iyo 12MP telephoto kamera ine 1 / 3.6 ″ sensor, 1.0-micron pixel saizi, 52mm yakatarisana urefu, 2x opical zoom, uye OIS.
Ngatitangei neyekutanga sensor. Iyo 12MP yekutanga kamera ndeye Sony IMX333 sensor, iyo yaishandiswa muiyo Snapdragon variants yeiyo Samsung. Galaxy S8 uye Samsung Galaxy Note 8 akateedzera kumashure muna 2017. Izvi zvinoreva kuti ane makore matatu-makore sensor. Muna 2018, Samsung yakavandudza kune yakasungwa sensor neDRAM kufa muGreen S9, ichigonesa chokwadi 960fps inononoka-kufamba kurekodha. Iyo Galaxy Note 10 Lite ine 960fps inononoka-inofamba kurekodha, asi inoshandisa kududzira. Izvo zvakare haina mbiri yakapakatira ye f / 1.5 uye f / 2.4, sezvo ichiita kuenda neyakareruka f / 1.7 yakagadziriswa dhizaini. Iyo Galaxy S20 yakatevedzana inobvisawo zvakasarudzika chimiro chekaviri, icho chaimbove chiratidzo chemahara eSamsung kubvira kuGlobal S9. Zvinoreva zvekubviswa kwechinhu ichi hazvina kukura sezvaangaita, zvinoshamisa kuti zvakaringana.
Iyo 12MP Ultra-wide-angle kamera yakasiyana neye 16MP Ultra-wide-angle kamera inowanikwa mu Samsung Galaxy S10 uye Galaxy Cherekedza 10 nhepfenyuro. Sezvo ine chigadzikiso chakaderera, saizi yepikiseli yakakwira kusvika 1.12-micron, iko kufamba kwakanaka kwemifananidzo yepasi. Iyo haina autofocus. Iyo 12MP telephoto kamera ine chaiyo telephoto lens, panzvimbo yeGPS S20 yechipiri 64MP kamera, iyo isina chaizvo telephoto lens. Iyo kamera yeGlass Note 10 Lite's telephoto kamera inoita seinosimudzwa kubva kuneiyo yeGirazi S10 uye neGirazi Note 10. Yayo 52mm yakatarisa kureba inobvumidza 2x opical zoom, uye kusanganisa kweOIS kunogamuchirwa.
Pepa, iyo Galaxy Note 10 Lite yakawanda yekare kamera setup inofananidzwa zvakanaka neiyo yeGirazi S10 Lite. Iyo S10 Lite ine yakakwirira-resolution 48MP yekutanga kamera, asi inosvetukira pane telephoto kamera inofarira macro kamera, iyo ine nharo isingashande. Iyo Galaxy Note 10 Lite's trio yemakamera e12MP ndeye, saka, iri padyo zvakanyanya kune yakanyanya kudhura yeGlass S uye Yekutevera nhaurwa. Ehe, zvinoshungurudza kuona Samsung ichishandisazve matatu-makore-kamera sensor. Kugadziriswa kwemifananidzo kwakakoshawo mazuva ano, zvakadaro, saka regai tiwone kuti iyo Galaxy Note 10 Lite inobata sei kumusoro uko.
Kamera app uye ruzivo rwevashandisi
Iyo kamera kamera yeGreen Note 10 Lite yakafanana neiyo imwe UI 2.0-powered Samsung foni. Kuti uwane zvimwe zvakawanda, tarisa zvedu Galaxy S10e ongororo. Samsung yakafambisa sarudzo shoma dzakatenderedza uye yabvisa kuita kwechigarire kwekugona kusarudza iyo yekusagadzikana kamera modhi. Iko kushanda kwepakati kunoramba kwakafanana, zvakadaro. Musiyano mumwe chete wakakosha ndewekutiGlass Note 10 Lite haina chimiro cheLabhu chekutora HDR10 + mavhidhiyo, kusiyana nevaroora rakanyanya kudhura. Iyo ine 4K ku60fps kurekodha vhidhiyo, uye vashandisi vanogona kurekodha mavhidhiyo mune HEVC fomati. Saizvozvo, mapikicha anogona kutorwa mune HEIF fomati. Zvimwe zvinhu zveSamsung Camera app, seLive Focus, Scene Optimizer, Shot mazano, Ultra-wide Lens Correction, uye RAW kubatwa, zvakachengetwa pano.
Iyo kamera inoshandisa mushandisi weGreen Note 10 Lite zvakare yakanakawo Iyo app inokurumidza kuvhura. Kutarisa uye kuvhara makamhanyisa zvakanakisa nekuda kweDual Pixel PDAF, zvinoreva kuti iyo autofocus kunyangwe mune yakadzika mwenje haisi nyaya. Chiyero chekamera yekuona kamera inodonha mumwenje wakadzika, uye iyo yekutarisawo ine rima kupfuura raifanira kuva. Idzi ndidzo nyaya diki. Ini ndine kusarerekera kunzwa kune Samsung's Scene Optimizer. Iyo inowedzera saturation uye kuratidzwa, asi iyo Galaxy Note 10 Lite yekunongedza kubatwa kweiyo ine simba renji haina kukwirira kuti iite iyi nyaya. Kune iyo yakawanda chikamu, inogara isiri iyo nzira uye isina kukanganisa kune ruzivo rwevashandisi kamera.
Kuongororwa kwemhando yemifananidzo - Zuva
12MP yekutanga kamera
Mumasikati, iyo 12MP yekutanga kamera yeGreen Note 10 Lite inotora mifananidzo yakanaka. Haisi mutambi wepamusoro, asi iri padyo neiyo yepamusoro tangi mumutengo wayo mabhureki. Panyaya yekuwonekera, simba rakasiyana, chena kuyera, kuwanda kwemavara, zvairwadza, asi kwete zvachose zvisingatarisirwi, kuona kuti iyo Galaxy Note 10 Lite inotsvedza muzasi meiyo Galaxy S10e's 12MP yekutanga kamera. Haisi iyo yakawanda yemakwikwi epedyo; iyo Galaxy S10e inongobata huwandu hwakawanda hwesimba nekuti yayo nyowani sensor, uye nekudaro, mapikicha ayo ane zvakawanda zvimwe zve "wow-factor". Izvi zvinoreva mamwe emifananidzo yeGlass Note 10 Lite yemasikati mifananidzo inogona kutsanangurwa se "husina kusimba". Izvo zvinoenderana nemutengo wayo vanokwikwidza, iyo yeGlass Note 10 Lite yakaderera kune OnePlus 7 Pro uye iyo OPPO Reno 10x Zoom maererano nekuratidzwa uye simba rakasiyana. Iyo kamera yeAmerican Galaxy Note, hongu, asi zvakare inoratidzika kunge isiri 2019 Samsung mureza mureza, ingangoita masikati.
Panyaya yekuchengetedzwa kwakadzama, iyo girazi reGlobal 10 Lite yakajairwazve. Mifananidzo yaro yakanyanya kutonyanya kupusa pane iya yeGlobal S10e pano, asi chinhu ndechekuti kuchengetwa kwenyaya yeGlass S10e kwaisava kwakakura munzvimbo yekutanga. Kugadziriswa kwemufananidzo weSamsung kuchine nyaya sezvo yakadzama fungwa inopihwa kuitira kuti isave nemafoto, ichi ndicho chisarudzo chisina kunaka kutora mumakamera. Izvi zvinoreva kuti mafuta pendi mugumo unoonekwa mune mamwe samples. Iyo OPPO Reno 10x Zoom iri pamberi apa, uye neiyo OnePlus 7 Pro. Zvakare, Samsung inoenderera mberi kutsvedza kumeso. Iyi inyaya irikunetseka mukati memakambani emakamera e-smartphone uye iripo kunyange mureza yeGreen S20 +, saka ini handisi kuzove ndakanyanya kuomarara pane iyo Galaxy Note 10 Lite pano. Nekudaro, izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti foni haizvitsaure pachavo pano munzira chero ipi zvayo.
Pakazere, iyo kamera ye12MP yeGreen Note 10 Lite ingaite senge yakafanana neGirazi Mucherechedzo 10+, asi haina. Nekuda kweiyo sensor yechembere, kamera haina kukwanisa kuenderera pamwe nehama dzayo dzinodhura zvakanyanya maererano nekufumurwa, simba rekutora rakabatwa, uye kunyangwe danho rekuchengetedza. Nekudaro, misiyano iyi haina kubatanidzwa kuti ive "husiku-uye-zuva" musiyano, chinova chinhu chakanaka mukufarirwa kwaGeneral 10 Lite. The Google Pixel 3a ichiri kuratidzika seyemhando yemhando yemakwikwi mune ino mutengo poira kune yeGoogle inonzwika ruzha kuderedza algorithm. Mamwe makwikwi emakwikwi anokwikwidza kukwikwidza neiri kana ari nani iyo Galaxy Note 10 Lite kamera pano.
12MP Ultra-yakafara-pakona kamera
Iyo 12MP Ultra-wide-angle kamera, kune rumwe rutivi, inoita zvakanaka. Ini ndakanga ndisingafare neiyo Galaxy S10e's 16MP Ultra-wide angle maererano nechengetedzo yakadzama. Nenzira inoshamisa, iyo Galaxy Note 10 Lite inoita zviri nani pano. Huwandu hweruzivo rwuri kubatwa hausati rwuri parutivi neiyo yekutanga sensor, sezvinotarisirwa. Iyo yekupedzisira-yakafara module kamera inonakidza kutamba nayo, uye muna 2020, chinhu chakakosha chishandiso chepakati uye huremu makamera mafoni. Iyo 12mm inotarisa kureba inopa yakakura kwazvo kufukidzwa, uye lens yekururamisa inogona kuve yakagadzirirwa muzvimiro kugadzirisa iyo isingadzivisiki iyo inokonzerwa nekuve neyakakura yakadaro kufukidzwa. Iyo Galaxy Note 10 Lite's Ultra-wide-angle kamera inonyatso nani kupfuura iyo OPPO Reno 10x Zoom, ine OnePlus 7 Pro kuva mupikisi wepedyo.
Iyo 12MP telephoto kamera ndeye yakajairwa kamera kusvika pakazara telephoto kamera kuenda. Ndinoonga mashandisiro ayo kunyangwe isingaite senge Ultra-wide-angle module. 2x Optical Zoom iri nani pane digit zoom, saka ndinofara kutora kuwedzera kwakawedzera. Panyaya ye-pi-pixel yakazara, iyo kamera yeGreen Note 10 Lite's telephoto haina kunaka seye OnePlus 7 Pro's 3x zoom telephoto kamera. Iyo OPPO Reno 10x Zoom's periscope 5x optical zoom module inopa kure-musango zoom, asi inouya neyayo zvipingaidzo. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kuratidzwa uye huwandu hwesimba reiyo telephoto kamera yakasiyana neiyo yekhamera kamera. Apple ine izvi zvakafungidzirwa, uye Samsung inoda kutevera tsoka dzeApple.
Indoor mufananidzo zvemhando
Iyo Galaxy Note 10 Lite yemukati wemhando yemhando yepamusoro inonyanya kufadza kupfuura iwo mufananidzo wezuva remufananidzo. Mune yakanyatsofambidzwa mukati mepfuti, inogona kuramba ine kana kunyange nani makwikwi emutengo. Mune yakadzika-lit yemukati mafoto, iyo inokwira kumusoro kune izvo zvinodiwa. Imhaka yekuti inogona kuvimba Samsung's usiku maitiro, ino ndeimwe yemhando dzeusiku hwakanaka muindasitiri iyi. Nehusiku maitiro anogoneswa, iyo Galaxy Note 10 Lite yemukati shoti yakanyanya kutsanangurwa kupfuura iyo OnePlus 7 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, uye kurongeka kwevamwe vatambi vemakwikwi. Samsung's Night mode inotora 4-5 masekondi, asi iyo nguva yekumirira yakakosha sezvo inongoguma yakawanda yakatsanangurwa uye zvirinani kuratidzwa mifananidzo. Iine husiku maitiro, iyo Galaxy Note 10 Lite kamera inokwanisa mukati memukati, kunyangwe mukati mayo kupenya kwechiedza kwakadzikira pane iyo yemakwikwi emakamera nekuda kweye sensor yekare.
Ultra-wide-angle uye telephoto kamera ndeyekushandiswa mashoma pano. Nechemumoyo, maitiro ehusiku anogona kuzadza imwe yekukanganisa kweiyo Ultra-wide-angle kamera, uye inogona kuguma nemifananidzo yakanaka. Kune rimwe divi, iyo telephoto kamera inopa zvizere mumamiriro ezvinhu epasi pekuvhenekera mukutarisira zoom yedhijitari, sezvingatarisirwa. Chimiro chehusiku hachifanirwe kushandiswa neye telephoto kamera.
Pakazara, iyo Galaxy Note 10 Lite inotora yakanaka yemukati mafoto ayo anowanzo kuve ari nani pane iwo mafoto anotorwa nevanodhura mureza. Samsung inotungamira muusiku maitiro emifananidzo kugadzirisa inobhadhara pano.
Kuongororwa kwemhando yemifananidzo - Chiedza chakadzika
Iyo yakakurisa iyo Galaxy Note 10 Lite ine mukati memifananidzo inotakura kuenda kune ekunze kwakadzika mwenje mafoto. Kugadziriswa kwemufananidzo we Samsung kunofanirwa kukanganiswa mukujeka kwemasikati, asi muchiedza chakaderera, yakakura zvakanyanya. Mapepa emwenje akaderera anotora huwandu hwakajeka hwechiedza uye hune simba rakasiyana kunyangwe isina husiku maitiro. Panyaya yekuchengetwa kwakadzama, Samsung iri pamberi pe OnePlus pano, sezvo OnePlus 7 Pro ingori isingakwanise kuramba iripo, kunyangwe mushure mezvose zvayakagadzirisa. OPPO iri padyo neReno 10x Zoom uye imakwikwi, asi ichiri danho rakanaka mukufarira kwaGeneral 10 Lite.
Nehusiku maitiro akagoneswa, iyo Galaxy Note 10 Lite inogona kuenzanisa zviri pamutemo ne, kana zvishoma kudonha kweiyo, Google Pixel 3a's Night Sight. Samsung's Night mode inonunura zvese izvo zvakange zvambo bvisirwa kunze, uye inopenya mafoto zvakare. Izvo hazvina kuita seSight Sight, asi mukusuwa kunosiririsa kwemafoni aHuawei, ndiyo inotevera sarudzo yakanakira yeApple. Maitiro emanheru anogonesa iyo iGreen Note 10 Lite kutora zvechokwadi mapikicha akanaka mune rakaderera. Yakadzama kuchengetwa, kuratidzwa, kukwana kwemavara, chena chiyero, uye simba renji zvese zvinogadziriswa zvakanaka. Iko kushamisika kunoshamisa kubva kutanga kwa2019, apo Samsung yakanga isina manyorero husiku maitiro panguva yekutanga kweGPS S10, uye zvichitambura mumatambudziko. Iyo itsva kambani yeusiku maitiro inogona kuita zvishamiso zvepakati-mabhii mafoni seGreen Note 10 Lite.
Pakazara, iyo Galaxy Note 10 Lite inoita chaizvo mushe mukupepuka mwenje kutora mafoto. Ehe, ine zvikanganiso zvayo, uye haisi kuzokwikwidza ne Huawei P30 Pro, Semuyenzaniso. Iyo zvakare inowira pazasi pekuratidzira Galaxy S20 + nehuwandu hwakakosha, asi izvo zvinotarisirwa. Pamutengo, foni ine inokwanisa kamera yekubata mafoto murima.
Vhidhiyo yemhando yekuongorora
Iyo Galaxy Note 10 Lite inogona kurekodha vhidhiyo kusvika ku4K pa60fps. Sezvinotarisirwa, EIS yakaremara mune 60fps modes. Izvo zvakaoma kutaura kana OIS inogoneswa mumavhidhiyo e60fps. Mavhidhiyo e30fps anoonekwa akagadzikana kupfuura mavhidhiyo e60fps anotenda kuEIS. Mavhidhiyo anogona kutorwa ese ne Ultra-wide-angle kamera pamwe neye telephoto kamera. Super Steady mode, yakatanga kuonwa paGirazi S10, inodzoka zvakare, ichishandisa iyo yekupedzisira-yakafara kamera kamera kudzikamisa mavhidhiyo kupfuura iyo yakajairwa EIS yaizowanzoitika.
Mavhidhiyo e4K 60fps ane EIS akaremara, zvinoreva kuti ari shaky. Vane chiyero che71MM bit. Autofocus, kuratidzwa, dhairekitori, uye simba renji zvinhu zvese zvakanaka paGirazi Onai 10 Lite. Aya mavhidhiyo haasi kuzowirirana neiyo Galaxy S10 mavhidhiyo, asi misiyano midiki. Usashandise nzira iyi muchiedza chakaderera nekuda kwekushomekerwa. Izvo zvakafanana zvinoshanda kune 1080p pa60fps mavhidhiyo, sekusiyana nekugadziriswa kwavo uye bit rate (28Mbps), ivo vane maitiro akafanana.
Mavhidhiyo e4K 30fps, akarekodwa nehurema hwe 48Mbps, akagoneswa EIS. Samsung's EIS ndeimwe yemhinduro iri nani pamusika, uye ini handina kana kunyunyuta kukuru. Iyo FOV inoderedzwa, sezvaitarisirwa. Mukujeka kwemasikati, iyi modhi inoshanda zvakanaka, asi kuvandudzwa zvakadzama pamusoro pe1080p hakusi mutsauko pakutanga kutarisa, sezvo ivo vachibatsira zvakanyanya pakuona pane 4K kuratidzwa uye nekuda kwezvinomera. 1080p mavhidhiyo madiki madiki maererano nehukuru faira, inotarisirwa sezvo vaine chiyero chidiki che14Mbps.
Dambudziko chairo reGreen Note 10 Lite yevhidhiyo kurekodha vhidhiyo rakaderera. Vashandisi vanowanzo tarisira kuti 30fps modes inoshanda zvakanaka kune yakaderera mwenje vhidhiyo yekurekodha. Nekudaro, iyo Galaxy Note 10 Lite inodonha kumeso kwayo apa, sezvo kwayo kuderera vhidhiyo kurekodha kunetsekana. Mavhidhiyo akareruka, ese 4K uye 1080p pa30fps, ane ruzha rwakanyanya. Ivo vakapenya zvakakwana, asi kudzora ruzha kwakaipa zvekuti inofanirwa kutaurwa. Iyo OnePlus 7 Pro uye OPPO Reno 10x Zoom inogona kunge ine mavhidhiyo akasviba, asi kudzora kwavo ruzha vanokwanisa mune vese 1080p uye 4K. Zvakare, ivo vari nani zvakanyanya pane iri basa. Kunyangwe mafoni anodhura achirova iyo Galaxy Note 10 Lite pano.
Zvimwewo zvinhu zvakaita se Ultra-wide angle uye telephoto vhidhiyo yekurekodha inoshanda nemazvo. Iwe unogona kuchinja makamera zvakananga panguva yekurekodha zvakare. Super Steady mode ine kugadzikana kukuru, asi yevhidhiyo mhando pachayo yakaipa kupfuura vhidhiyo yakanyorwa neyekutanga sensor. Pakazara, ini ndakaodzwa mwoyo zvikuru neGlass Note 10 Lite pano. Proses dzayo dzinodhonzwa pasi nehurombo rakaderera light vhidhiyo kurekodha. Izvi zvinogona kutaridzika sedare rekushandisa, asi zvine zvazvinoreva kunyangwe kurekodha vhidhiyo. Iyo inyaya iyo Samsung inofanirwa kugadzirisa nekukurumidza sezvinobvira.
Samsung Galaxy Cherechedzo Lite - Audio
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite ine 3.5mm musoro wefoni jack. Hongu, izvo zvakakwana kuti zviite kuti ive isina kukodzera kurudziro mune yekuteerera mamiriro. Izvi zvinodaro nekuti kunyange inodhura mireza iri kutanga kusvetuka mukuru wefoni. Iyo OPPO Reno 10x Zoom, iyo OnePlus 7T, iyo uye iyo Realme X50 Pro vese vakasarudza kutungamidza musoro weiyo jack inofarira USB Type-C odhiyo uye Bluetooth odhiyo. Iyo Galaxy S10 Lite yakawira kune chirwere chimwe chete, asi iyo Galaxy Note 10 Lite yakatiza. Iyo ichine musoro wepasuru jack, uye kuva nayo ndeyekuwedzera kuri nyore mazuva ano. Kunyangwe kana musoro wefoni isina kukodzera iwe pachako, haisi kutora chero chinhu kubva pane yakasara yefoni, zvisinei nemakambani angakuudze.
Vatauri veReal 10 Lite's stereo vatauriwo parutivi nevari kukwikwidza mutengo. Ivo vanonzwika vachirira uye vakajeka. Samsung inoramba ichipa saruro yekuchinjisa mutsindo munzeve dzemushandisi. Izvi zvinoshanda kune wired audio. Iyo foni inotsigira modhiyo yekuwanika ye USB Type-C doko.
Samsung Galaxy Note 10 Lite - Software uye S Peni
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite yakaiswa simba neUni UI 2.0 pamusoro peApple 10. Isu takaenda mukudzika zvine chekuita neOni UI zvemukati mune yedu yekuvhara yapfuura, zvakare mune yedu Galaxy S10 Lite ongororo. Saka ini handisi kuzodzoreredza maitiro esoftware pano, uye ndinongotarisa pane zvakasarudzika S Pen-chaiyo maficha. Imwe UI pachayo inosarudzika inoenderana nechero mushandisi yekushandisa, kunyangwe sezvakambotaurwa, hazviite zvese izvo paGirazi Note 10 Lite. Iko kusanganisa kwekugadzira uye kushanda kunobatwa zvakanaka; saka Samsung inofanirwa kutarisa nezvekuita iko ikozvino. Kuongorora kweimwe yeUI yakakura maficha anogona kuoneka mukamuri yemazirodhi pazasi.
OneUI Zvinhu - Kuongorora
Iyo S pen ndiyo huru inowonekera yeCherechedzo 10 Lite. Icho chinangwa chose chefoni chakakomberedzwa chakatenderedza S Sent chiitiko, sevashandisi vakawanda vanorayirwa kutungamira vakananga kuGlobal S10 Lite. Iyo S pen pachayo haina kufanana neGirazi Note 10 nhepfenyuro. Iyo haina gyroscope, zvinoreva kuti mamwe maitiro emweya haagoneke. Ivo kazhinji vanove vakaitwa kunge mapuru, zvisinei, saka izvi hazvisi kurasikirwa zvachose kana. Iyo S Peni pane yeGreen Note 10 Lite yakaenzana neiyo iri paGirazi Note 9. Iyo ine Bluetooth LE, zvinoreva kuti inogona kushandiswa seyavhaira kure. Iyo ine supercapacitor yekugonesa kushanda kweBluetooth.
Iko kushanda kweSeni kwakakura. Iyo yekuisa musoro inotora zvinyorwa. Iyi inguva yekutanga yandati ndamboshandisa Galaxy Note zvakanyanya, saka ndiyo yekutanga chiitiko changu neS S pen. Kusvika pane stylus inoenda, iyo S Pen ingangove imwe yeakanakisa kwema stylus kunze uko. Iyo S pen haisi capacitive stylus, zvinoreva kuti hazvizoshande pane chero imwe foni kunze kweGlue Kumbuka nhepfenyuro. Zvinoda chaiyo Wacom digitizer. Iyo ine muchindwe-inotsigirwa rutsigiro, iyo pachayo inoita kuti ive nani zvikuru kupfuura chero yakachipa aftermarket stylus iwe yaunogona kutenga.
Kune vashandisi venguva yekutanga, kutora zvinyorwa pamwe neiyo S Pen muSamsung Samsung chiitiko chikuru. Iyo Samsung Manotsi app ane rakawanda rakasarudzika zvinhu, uye ndeimwe yepamusoro-bato bato zvigadzirwa zvandakaona munguva pfupi yapfuura. Iyo S pen pachayo inokodzera chaizvo muruoko. Kurongeka kwayo kwakakwira, uye iyo yekupedzisira yakadzikira zvekuti inogona kunzi isina basa. Iyo 4,096 mazinga ekudzvinyirira kwekunzwa kunoreva kuti akasiyana-siyana anodiwa akafukidzwa. Kurambwa kwePalm kunoshanda zvakanyanya, uye hapana manyepo enhema. Iyo S pen haina kungofanana nekunyora nepeni papepa - inonzwa iri nani pane izvozvo. Mavara anogona kutorwa nekombiyuta yesoftware zvakare, asi zvinyorwa zvakanyorwa nemaoko zvichiri kubatsira, kunyanya kune avo vashandisi vasinganzwe vakasununguka nekhibhodi software. Ini ndakafadzwawo nefoni dzeSamsung 'kunyora-kune-zvinyorwa. Izvi zvakashanda zvakanaka. Iyi ficha inobatsira muzvidzidzo zvehurongwa, asi iyo Galaxy Note 10 Lite mutengo uchiri wakakwira zvakanyanya kune mafoni ane stylus anokwanisa kuita zvakanaka mumisika yakaita seIndia mukati memamiriro ezvinhu.
Iyo Galaxy Note 10 Lite haina kuunza chero chinhu chitsva cheS pen, asi iyo iripo yekubatanidza kwekushanda kwayo yakatove yakakura. Screen-off memos dzichiri kuuraiwa zvakanaka. Mamwe maS Pen maficha akadai saSmart Select (kusarudza zvinyorwa pamapeji ewebhu), Screen kunyora (kunyora pawebhu mapeji, mapikicha, zvidzitiro, nezvimwewo), Meseji yeRarama, Dudziro, Magnify, Glance, uye Bixby Vision inochengetwa. Mamwe acho ane gimmicky kupfuura vamwe (Zvishandiso zveGIF zvishandiso gimmick), asi iwo maficha epakati akaitwa nemazvo. Mhepo zviitiko Ita vashandisi vatore mafoto kure ne S Pen's bhatani nekutenda kuBluetooth, uye zvimwe zviitiko mumaapps zvinowanikwawo.
Pakazara, iyo Galaxy Note 10 Lite ndiyo yakachipa foni pamusika neiyo yakarongedzwa stylus. Ndashandisa Microsoft Surface Pro 5 kumashure muna 2018, ndine chivimbo nekutaura kuti S Pen iri nani pane iyo Surface Pen mune zvakakosha zvinhu zvakadai sekurambwa kwechanza, latency, uye chokwadi chechinyorwa chechinyorwa-kune-rugwaro. Kana iwe uine hanya nezve stylus zvachose, iyo Galaxy Note 10 Lite inoderedza mutengo wekubvumirwa neinotonhorera ₹ 30,000. Kunyangwe iyo yakakwegura Galaxy Note 9 ichiri pamutemo inodhura ₹ 67,900 muIndia, saka iyo Galaxy Note 10 Lite inomiririra shanduko huru mumitengo. Icho chiitiko chikuru mukati mavo, asi ini ndichiri kumirira zuva apo Samsung kana chero imwe mudziyo wekugadzira inounza inokwanisa uye inoshanda stylus mune yakaderera yepakati-renhare mbozha, iyo yaizonyatsoita kuti iwanikwe kune makuru evatengi ve-smartphone.
Samsung Galaxy Cherechedzo 10 Lite - Hupenyu hwebhatiri & Kubhadhara
Iyo Samsung Galaxy Note 10 Lite yakagadzirirwa ne 4,500 4,370mAh (yakajairika) / 10mAh (shoma) bhatiri. Huwandu hwebhetri uhwu hwakanyanya kukwirisa kupfuura zvese chiyero cheGlass Note 10 pamwe neiyo yepamusoro-yekupedzisira Galaxy Note 10+, zvakanaka kuona. Kune rimwe divi, iyo Galaxy Note 9810 Lite inopihwa simba nechizvarwa-chekare Exynos XNUMX SoC, iyo isingazivikanwe nekuda kwesimba kana kugona simba. Saka foni inoita sei maererano nehupenyu hwebhatiri?
Mushure mekunge ndamboishandisa kwemwedzi, ndinogona kutaura kuti bhatiri reGlass Note 10 Lite rakakura pasina kuve mushe. A 4,500 9810mAh bhatiri yakakura inofanirwa kukonzera maawa manomwe-masere evhavha-yenguva, asi kusakwana kweExpynos 10 kunoreva kuti runhare runogona kungokwana maawa matanhatu kusvika matanhatu nehafu nechidimbu che-screen. Izvo pachako, nhamba iyoyo yakanaka. Iyo bhatiri yefoni inofanira kugara kwezuva mune yakawanda mamiriro. Zviri nani kupfuura hupenyu hwebhatiri hweGirazi S20e, sezvo nguva-iri pane inenge 30-10% yakawanda pafoni iyi. Iyo bhatari yeGlass Note 7 Lite iri zvakare nani pane iyo yeiyo OnePlus 10 Pro, asi iyo OPPO Reno 2.0x Zoom ichavarova vese. Pane rakabatana chinyorwa, Samsung yakavharidzira iyo bhatiri nhamba peji mune Imwe UI XNUMX, zvichiita kuti zvinyanye kuoma kutarisa skrini-pane nguva kubvira yekupedzisira yakazara yekubhadhara sezvo ikozvino yaverengerwa pazuva-rezuva. Izvi zvinofanirwa kukandwa kumashure nekukurumidza sezvinobvira mumaonero angu.
Panyaya yekuchaja, Samsung yakaputira iyo Galaxy S10 nhepfenyuro nekuvatumira chete ne 15W Adaptive Fast Charge. NeGlass Note 10 yakatevedzana, kambani iyi yakazopfuurira kuenda ku25W Super Fast Charging, zvichibva pa USB-C PD 3.0 protocol ine PPS. Iyo Galaxy Note 10 Lite haitsigire 45W kubhadharisa kwakasiyana neGlass Note 10+, asi sevaongorori vakazoona, hazvina basa. Izvi zvinodaro nekuti 45W yekuchaja paGreen Note 10+ uye Galaxy S20 Ultra haina kumbosiyana ne25W yekuchaja iyo yakawanda iyo yenguva yekuchaja. Samsung ine ruzha rwemagetsi yekuchengeta kune yakagadziriswa yekuchaja protocol sezvo ichideredza charger kupatsanurana, asi hapana kuramba kuti tsika yekuchaja mhinduro dzakadai OPPO's 65W SuperVOOC 2.0 yekuchaja (iyo Realme's 65W Dart Charging yakavakirwa) inokurumidza kupfuura Samsung's USB-C PD 3.0 kuraja.
Iyo Galaxy Note 10 Lite ichiri munzvimbo yakanaka, zvakadaro. Iine 25W charger inosanganisirwa, zvinotora rinenge awa kubhadharisa kubva ku15% kusvika ku100% yeiyo 4,500 8mAh bhatiri mukana. Izvo zvakanaka zvakakwana kune yakawanda yevashandisi. Pane imwechete tsamba, foni inoshaya isina waya yekuchaja. Iyi ipfungwa isina kusimba kana iwe uri mushandisi anoshandira wemawaya asina waya, uye iyo OnePlus XNUMX ichavhura munguva pfupi inotevera isina waya yekuchaja tsigiro. Samsung yakaita yakawandisa kudhura mitengo pano here? Zvekare, izvo zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Iyo Galaxy Note 10 Lite haina kuratidza chero oddities kana zvasvika pakudaidza mhando kana cellular chiratidzo chinogamuchirwa. Iyo inotsigira maviri VoLTE, sezvingatarisirwa. Kutsigirwa kweVoWiFi kunofanira kunge kuripo, zvakare, asi ini handina kushandisa foni neJio SIM kuyedza izvozvo.
Iyo foni yekufambisa mota hachisi chinhu chekunyora kumba nezve, zvinosiririsa. Mutengo uyu mabracket ikozvino une mafoni akaita seOnePlus 7 Pro, iyo OnePlus 7T, uye OPPO Reno 10x Zoom, iyo ine akanakisa vibration motors ekukuru haptic mhinduro. Iyo Galaxy Note 10 Lite's vibration mota inoshungurudza pakati, uye haigoni kutarisira kukwikwidza nefoni dzambotaurwa. Izvi hazvisi zveku-breaker kwandiri, asi ndicho chikamu chinoita musiyano mukuru mukushandiswa chaiko kwefoni parunhare.
Vatengi vanotsvaga yakachipa mureza vane sarudzo dzakawanda mazuva ano, angangoita mumisika yekuChina neIndia. Iko kune OnePlus 7 Pro uye iyo OnePlus 7T, pamwe neRedmi K20 Pro. Iyo Realme X50 Pro uye iQOO 3 fomu chikamu chekutanga cheiyo Snapdragon 865-powered mafoni. Samsung yaizivikanwa zvisirizvo mumusika uyu muna 2019, sezvo nharembozha dzeA-kambani dzaingogona kuverengerwa sepamusoro soro-yepakati, kwete semaregi anodhura. NeGlass S10 Lite, kambani yakazove yakafukidza kushaya simba. Iyo Galaxy Note 10 Lite, kune rumwe rutivi, iri yakawanda yefoni yeiniche iyo inonzwisisika kune imwe subset yemusika.
Panyaya yekugadzirwa, iyo Galaxy Note 10 Lite inosiya zvimiro zvakanaka sezvo ukobvu uye huremu hwayo huri mukati memiganhu inogamuchirwa. Iko kubwinya kwechimiro chepurasitiki kumashure chinhu chisina kunaka, uye girazi sechinhu chepakutanga chaizove chine musoro mune hunhu hunokwanisa. Kune rimwe divi, chimiro chakadzika chegomba punch yekumberi kamera chinhu chakanaka. Chimiro chechimiro chechisimba kamera yakavharidzirwa zvakare inova nechokwadi chekusaona kwekuona.
Iyo Galaxy Note 10 Lite's kuratidzwa hairarame kusvika kune yakakwirira miuyo yeGlass Note legacy. Iyo yepakati-dhiza repanzvimbo mune dzakawanda. Yakakwirisa Magetsi Nzira inogamuchirwa kuti uone, uye Samsung haigadziri zvikanganiso zvakakura nekujeka kwemavara. Nekudaro, iyo yakakwira angular colour changer uye kushaikwa kwepamusoro yekuzorodza pani yepasi panguva ino mutengo kunogumbura kuona.
Performance-huchenjeri, hapana akawanda akanaka mamaki nezveGlass Note 10 Lite. Izvo zvinogara zvichizviratidza kuva nhano dzakawanda shure kweinodhura mireza ye2019, regai izvo zve2020. Iyo Exynos 9810 SoC yaisafanirwa kunge yakaita kune iyi foni, uye iri ari chikuru chakakanganisa chinobata mushandisi chiitiko kubva pakuva akanaka sezvaangave. Iyo Snapdragon 855, sezvinoonekwa paGirazi S10 Lite, ingangove iri sarudzo ine musoro. Kunyangwe Exynos 9820 ingadai yakaita mamwe manzwiro. Sezvazviri izvozvi, iyo Galaxy Note 10 Lite ine zvinoshungurudza CPU, system, GPU, uye chaiyo-yenyika performance. Nyasha chete yekuchengetedza ndeyekuti jank yakasangana mukati meese mushandisi interface ine mashoma, asi iripo kana iwe uchitsvaga.
Katatu-kumashure kamera yakagadziriswa yeiyo Gadziriso yeGeneral 10 Lite's yakakura kupfuura ayo asina kunaka. Iyo positives ndeyekuti inonyora mhedzisiro yakasarudzika maererano nemukati memukati mufananidzo uye yakadzika mwenje kutora mafoto. Mukujeka kwemasikati, zvakadaro, haina kana zvakanakira pamusoro pemakwikwi sezvo ichibatirwa neiyo sensor yekare, ichitungamira mukusava nesimba kwesimba rekutora uye kushomeka kwezita rakawanda. Mune mazwi akazara, ichiri kamera yakakura nekuda kweiyo Samsung yakakura mufananidzo kugadzirisa mumwenje wakaderera, unoenderana neyakagadziriswa husiku Manheru. Mhedzisiro yemasikati yakaenzana inopindirwa nemifananidzo yakajeka muchiedza chakaderera, zvinoreva kuti iyo yakatambanuka kuita. Iyo Ultra-wide-angle uye telephoto kamera zvakare yakanyatsonaka kune iyo mutengo point.
Iyo foni inozvibatirawo zvakanaka maererano neyemavirazuva vhidhiyo yekurekodha mune zvese zviri 1080p uye 4K, asi inogumbura zvakasviba pakapusa vhidhiyo kurekodha nekuda kwehurombo hwakanyanya kuderedza ruzha. Murombo akadzika low light vhidhiyo kurekodha zvinoreva kuti foni inowira shure kwayo mutengo kukwikwidza mune izvi. Izvi zvinogona kugadziriswa ne software yekuvandudza, uye inofanirwa netariro kuti inofanira kuitwa.
Iyo Galaxy Note 10 Lite's kukwira-uye-pasi kunopfuurira kune iyo yekuteerera mamiriro. Iyo ine 3.5mm musoro wefoni jack, inonyatso kuzvisiyanisa iyo pachavo mumusika we2020 wepakati wepakati-peyisi. Vatauri vari pamusoro akarerekera zvakare, saka iyi ndiyo imwe nzvimbo iyo iyo foni haina kana yakakura isina simba mapoinzi.
Panyaya yesoftware, Imwe UI 2.0 inoramba ichizvitsaura seimwe yemhando yepamusoro mushandirapamwe pamusika, ine yakavhurika chiitiko chakatemwa, ruoko rwemumwe mushandisi mushandisi, uye yakanaka typography. Izvo zvakasiyana kubva ku stock Android 10, asi kazhinji shanduko ndedzekuita zvirinani.
Iyo S pen ndiyo yatinosvikirwa neGlass Note 10 Lite yekutengesa nzvimbo. Ehe, rinonunura. Kune avo vasina kumbobvira vambozviyedza, iyo S Pen ichave chiitiko chakanaka. Kune vashandisi avo vanofanirwa kuve ne stylus, iyo Galaxy Note 10 Lite inoburitsa sezvo iine imwe yeakanakisa stylus kusevenzesa kuma smartphones mune fomu yeS Pen. Kutonga kweSamsung kuno kwakazara zvekuti makore masere mushure mekutanga kweGlass Note, hapana mugadziri weAditor Android akafunga zvakaomarara kupokana musoro-we-musoro munzvimbo stylus. Huawei ane iyo M Pen yepiritsi yayo, uye Motorola yakatanga a Moto G Chinyorwa yevatengi vepakati-peiri, asi aya haana kukwanisa kupa chero chikonzero chekunetseka kune Samsung. Iko kubatanidzwa kweS Pen, kukura kwemhando, uye mhando yekuurawa kwechimiro inoita kuti ive yakasarudzika mumusika.
Iyo Exynos 9810 SoC inodzivirira iyo foni kushandisa iyo yayo 4,500 25mAh bhatiri kune yayo kuzere kugona, asi pakupera kwezuva, hupenyu hwebhatiri huchakanaka kwazvo. Vazhinji vashandisi havafanirwe kunge vaine nyaya nezvekuita kuti foni igare kwezuva pane yakakwana. XNUMXW Super Fast Kachaja zvakare chinhu chinobatsira.
MuIndia, iyo Galaxy Note 10 Lite inotengeswa mumaviri akasiyana: 6GB RAM / 128GB yekuchengetedza ₹ 38,999 ($ ​​530), uye 8GB RAM / 128GB kuchengetedza kwe ₹ 41,999 ($ ​​570). Foni haina kutengeswa muUS, asi yaenda munzira kuenda kuEurope nedzimwe misika yepasi rose. Iyo soC kusiyanana yakafanana kumatunhu ese. Kwakanaka kwakadii kukosha kwefoni kurudziro? Kune nzira mbiri dzekutarisa kwazviri.
Kune vashandisi veSeni, Garo reGlue inofanirwa. Nenzira iyi, izvo chete zvakasarudzika zveGlass Note 10 Lite ndiyo yakajairika Girazi reGiredhi 10 uye neGirazi Onai 10+. Iyo Galaxy Note 10 ine diki 6.3-inch kuratidza uye inodhura ₹ 69,999 ($ ​​950) yeiyo 8GB RAM / 256GB yekuchengetedza yakasiyana. Iyo Galaxy Note 10+, kune rumwe rutivi, ine hombe 6.8-inch 19: 9 kuratidza (yakawanda skrini nzvimbo), uye inodhura ahipping ₹ 79,999 ($ ​​1085) yeiyo 12GB RAM / 256GB yekusarudzika misiyano. inodhura seGlass Note 10 Lite.
Iyo yakajairika Galaxy Note 10 ichapa chikamu-yegiredhi yepakati S Pen chiitiko nekuda kweiyo diki, yakatenderedzwa kuratidza, kunyangwe iyo S Pen ichizvarwa chitsva. Vakatendeka yeGlass Note vashandisi vanozonyanya kufarira iyo Galaxy Note 10+, uye kwete iyo midiki, yakanyanya compact Galaxy Note 10. Kune vashandisi vanofarira guru-screen Galaxy Note, iyo Galaxy Note 10+ uye neGreen Note 10 Lite sarudzo. Kana iwe ukabhadhara kaviri mari iyo yeGreen Note 10+, iwe uchawana dhizaini iri nani nekuvakira mhando (madiki bezels, girazi kumashure), yakakura, yepamusoro yepamusoro uye zvirinani kuratidza mhando, inokurumidza SoC ine zviri nani zvepasirese nyika (Exynos 9825), kashoma kamera yekumashure, kamera iri nani kumberi, kudhirowa isina waya, kuchaja isina waya, IP68 yakavimbiswa kuramba kwemvura uye Nyowani S P ine zvimwe zvinoshamisa. Iwe unorasikirwa kunze kwefafitera yekuratidzira uye 3.5mm musoro wefoni jack, zvakadaro.
Izvo zvinofanirwa kuve pachena, saka, kuti iyo Galaxy Note 10+ haina kukodzera 2x (₹ 40,000 zvimwe) mutengo weGreen Note 10 Lite. Kunyange iyo yakajairwa Galaxy Note 10 yakakodzera iyo ₹ 30,000 yekutanga pamusoro peGlass Note 10 Lite. Vashandisi vanongofarira chete iyo S Pen uye vanogona kurarama neyekudzora dhezheni uye kudhirisa-mutengo kunokurudzirwa kuti utore iyo Galaxy Note 10 Lite. Ndizvo ari chete sarudzo yeiyo stylus-ine foni foni mumutengo uyu bracket.
Ko kana usinga farire iyo S Peni, asi, kana woiona seyakaita niche iro rinoshandiswa zvisingawanzo? Samsung yaizobva yanongedza iwe nemufaro wakananga kuGlobal S10 Lite, inova inonyatsoita general-chinangwa yakachipa yekuremekedza sezvo yayo system uye GPU maitirwo ari nani zvakanyanya. Iyo Galaxy Note 10 Lite ine yakajairika kushure kamera setup kupfuura iyo Galaxy S10 Lite. Iyo ine zvakare zviri nani mhando yemufananidzo muchiedza chakaderera pane yakawanda yemakwikwi emitengo kubva kune vamwe vanogadzira michina, asi avo vanokwikwidza mutengo vane zvakanyanya kuita zvakanaka, zvirinani zviratidziro, nekuchaja nekukurumidza, uye zvirinani zvigadzirwa. Iyo yekupedzisira sarudzo inoenderana nekuti ndeipi pazvinhu izvi vatengi vanoisa pamberi zvakanyanya.
Vanotengwa mureza vatengi vanogona kubva vakwira kune OnePlus 7T kana chero imwe inokwenenzverwa mureza runhare kubva kune dzaReatme neIQOO, nepo Samsung vashandisi vanogona kuenda vakananga kuGlobal S10 Lite. Aspiring vashandisi veS Pen vanoda kuwedzera zvakapetwa pane iyo Galaxy Note 10 Lite kunyangwe Samsung yakanetesa kukosha kwayo kwakakura kweavo vasiri-S Pen pen vashandisi. Ini ndinoshuva dai yaive yakawanda inokwanisa-chinangwa chakakwanisika mureza. Sezvazviri, inogona kurondedzerwa pasina mamiriro kune chete iyo stylus mushandisi yemusika weiyo smartphone.
The post Samsung Galaxy Note 10 Lite Ongororo: Democratizing iyo S Pen chiitiko yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Galaxy S10 Lite uye Cherekedza 10 Lite Hands-on: Mhinduro ye Samsung kune OnePlus uye Xiaomi
Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino (Yakagadziridzwa: Gunyana 21)
Best Best Samsung Galaxy S10 cases: Ideal cases kubva pa £ 8 kusvika ku £ 60
Samsung Galaxy Unpacked 2019 inoyevedza: Galaxy S10, S10 +, S10e, Galaxy Fold yakaita hurukuro